| ५:५९:५८ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७७ साल फागुन २१ गते । शुक्रबार । इ.स.२०२१ मार्च ०५ तारिक । शकसंवत् १९४२ । प्रमादी संवत्सर । उत्तरायण । शिशिर ऋतु । नेपाल संवत् ११४१ । फाल्गुन कृष्णपक्ष । तिथी– सप्तमी, २३ बजेर ४२ मिनेट उप्रान्त अष्टमी । नक्षत्र–अनुराधा,२६ बजेर १७ मिनेट उप्रान्त ज्येष्ठा । योग– हर्षण,२४ बजेर २१ मिनेट उप्रान्त बज्र । करण–भद्रा,१२ बजेर ५२ मिनेट उप्रान्त बव,२३ बजेर ४२ मिनेट उप्रान्त बालव । आनन्दादिमा–राक्षस योग । चन्द्रराशि–बृश्चिक । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर २६ मिनेटमा,सूर्यास्त १८ बजेर ०५ मिनेटमा । दिनमान २९ घडी ०८ पला ।
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ):- कष्ट भावमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले भौतिक सम्पती तथा सवारीसाधनको प्रयोग तथा परिचालन गर्दा ख्याल गर्नुहोला । मायाप्रेम गर्ने जोडिहरुले आजको दिन नजिक नहुँदै राम्रो रहनेछ । आर्थिक पाटाहरु कमजोर रहनेछन् भने व्यापार व्यवसायमा आम्दानी नहुँदा दैनिकी प्रभावित हुनेछ । दिदिबहिनीहरुसँग मनमुटाब बढ्नेछ भने आफन्त तथा साथिभाईहरु तपाईदेखी टाडिन सक्छन् ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो):- चलि आएका परम्परालाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिनेछ। प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। इच्छाशक्ति बढ्नुका साथै प्रयत्न गरेको काम छोटै समयमा पूरा हुन सक्छ। विशेष समारोहबीच प्रतिष्ठा, मान–सम्मान आदि पाइनेछ। स्वादिष्ट भोजनको आनन्द मिल्नेछ। परिवारजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ। प्रेम र मित्रताको गाँठो कसिलो भएर जानेछन् ।
मिथुन ( का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) :- पढाईलेखाईमा उत्कृष्ट नतिजाका साथ तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । व्यापार फस्टाएर जाने हुनाले अर्थ संग्रह मनग्गे गर्न सकिनेछ । कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा तपाईंकै नाम आउनेछ । मामा तथा मावली पक्षसँग सम्बन्ध थप सुधार भएर जानेछ । पुरानो समस्या तथा रोगहरु स्वत समाधान हुने योग रहेकोछ । तरपनि मुद्दामामिलामा सामेल भए हारिने सम्भावना रहेको छ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो):- रमाईलो भेटघाट हुने तथा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । शुभचिन्तक तथा आफन्तको सल्लाह तथा सुझाबलाई शिरोधार्य गर्दै अगाडी बढ्न सके गन्तव्य पहिल्याउन सहज हुनेछ । व्यापारमा लगानी गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ भने नयाँ योजनाको रुप रेखा कोर्न सकिने छ । प्रेममा नजिक भई आफ्ना भावना साटासाट गर्न पाईने हुँदा पन प्रशन्न रहनेछ । उपहार तथा भौतिक सम्पती प्राप्तिको योग रहेको छ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे):- स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आई काम गर्न बाधा हुनेछ ध्यान दिनुहोला । आमा, आफन्त तथा साथिभाईबाट टाडिएर लामो दुरिको यात्रा गर्नु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । राजनीतिमा आलोचना गर्नेहरु सक्रिय भएर लाग्नेछन् । अध्ययनमा समय दिन सकिने छैन भने बौद्धिक समारोहमा भाग लिने अवसर आएपनि न्यून पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ । कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी भने फस्टाएर जानेछ ।
कन्या ( टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो ) :- नयाँ काम गरी मनग्गे धन तथा सम्पति जोड्न सकिनेछ भने उद्योग,व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । मायाप्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ भने पतिपत्नीबीच एक अर्कालाई बिश्वास गर्दै अगाडी बढ्न सकिनेछ । आट,पराक्रम गर्न नडाराई अगाडी बढ्ने हो भने चाहेको गन्तब्यमा पुग्न सकिनेछ । विवाद वा हुलमुलमा सामेल नुहुनु होला । यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
तुला ( रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते ) :- विचारमा आउने परिवर्तनले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । तपाईको बोलिको सबैले कदर गर्नेछन् । व्यवसाय फस्टाएर जाने तथा आर्थिक अवस्था सुदृड हुनेछ । आफन्त तथा कुटुम्बसँग बसेर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । आफ्नो सञ्चित सम्पतिको प्रयोग गरी आम्दानीका स्रोतहरु फराकिला पार्न सकिनेछ । गितसंगितमा लाग्नेहरुका लागी समयले साथ दिनेछ ।
बृश्चिक ( तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू ) :- नयाँ प्रबिधिको प्रयोग गरि रचनात्मक कार्य गर्न सकिनेछ । राजनीति कर्मीहरुका लागी जनताको काम समयमा गर्न सकिने हुनाले पद प्राप्तीको गतिलो योग रहेकोछ । बिद्यार्थी वर्गहरुका लागी मेहनेत गरी अध्ययन गर्दा उत्कृष्ट नतिजा हात पार्ने योग रहेकोछ । सुन्दर तथा बिलाशिताका सर सामान प्रयोग गरी अरुको ध्यान आफुतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । लामो समयदेखी बिछोड भएका मित्रहरुसँग भेट हुनाले दिन रमाईलो गरी बिताउन सकिनेछ ।
धनु ( ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे ): – स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा बिक्रि घट्न सक्छ भने विदेशी सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्या देखापर्न सक्ने तथा उपचार खर्च बढ्ने योग रहेको छ । अल्छि गर्ने बानिले कामहरु बिग्रन सक्छ । अनावश्यक खर्च बढ्ने हुँदा दैनिक खर्च बढेर जानेछ । न्यून पारिश्रमिकमा दिनभर समय व्यातित गर्नुपर्दा अन्य काममा समय दिन सकिने छैन । मायाप्रेममा सामान्य मनमुटाव सिर्जना हुनेछ ।
मकर ( भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) :- अध्ययन अध्यापनमा अन्य दिन भन्दा सुधार गरी अरुभन्दा अगाडी बढ्न सकिनेछ । आफुले माया गर्ने मान्छेलाई आफ्नै वरिपरी देख्न पाउदा मन प्रशन्न हुनेछ भने परिवारका आवस्यक्ताहरु पूरा गर्न सकिनेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा पदोन्नती हुने समय रहेको छ । साथिभाईसँग रमाईलो भेटघाट हुने तथा मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । पैत्रिक सम्पतिको प्रयोग गरि आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा ):- चुनौतिहरुलाई किनारा लगाउदै कामहरु बनाउन सकिनेछ भने राम्रा कामगर्दा समाजमा स्थापित हुन सकिनेछ । व्यवसाय फस्टाएरु जाने तथा व्यवसायिक यात्रा हुनेछ । अध्ययनमा समय दिई आफ्नो बिद्यालाई निखार्ने सकिनेछ । आटेका तथा चाहेका कामहरु गर्न सकिने तथा साथिभाईहरुको राम्रो सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ । तरपनि प्रेम तथा मित्रताको बन्धन खुकुलो हुनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची):- सामाजिक काम गरी समाजमा नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ । पढाईलेखाईमा सुधार भएर जाने तथा आफन्तहरुलाई खुशि पार्न सकिनेछ । आफ्नो रितिरिवाज जोगाउने काममा समय खर्च हुनेछ भने तिर्थ यात्राको प्रसस्त सम्भावना रहेकोछ । व्यापार व्यवसायमा लगानी बढाई प्रसस्त नाफा कमाउने समय रहेको छ । प्रेम प्रशङगमा रमाउन चाहनेहरुका लागी दिन उत्तम रहेकोछ । तपाईको दिन शुभ रहोस् ।
तपाईकाे साप्ताहिक राशीफल [ चैत २२ गते आईतबारदेखी चैत २८ गते शनिबारसम्मको ] २ हप्ता पहिले
चन्द्रागिरिको मुनाफामा गिरावट आएसँगै घट्यो शेयरमूल्य भर्खरै
मध्यपहाडी लोकमार्गको क्रसर उद्योग १ मिनेट पहिले
व्यवसायी सम्पर्कविहीन हुदाँ कालीगण्डकी करिडोर निर्माण अलपत्र १ मिनेट पहिले
संसदकाे चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य १२ मिनेट पहिले
भन्सार एजेन्ट छनौटका लागि परीक्षा मिति सार्वजनिक १४ मिनेट पहिले
रात्रीकालिन व्यवसायमा रोक लगाउने मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय १५ मिनेट पहिले
आईएलओको पैसामा एमाले भातृसंस्थाको मस्ती, को-को परे कारवाहीमा ? २६ मिनेट पहिले
मानसिक तनावलाई व्यवस्थापन गर्न योग गर्दै पर्यटन व्यवसायी २८ मिनेट पहिले
सिभिल बैंकको कामू सीईओमा पोखरेल नियुक्त २८ मिनेट पहिले
उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिँदै सकियो वासन्ती छठ ३५ मिनेट पहिले
अझै खुल्न सकेनन् म्याग्दीका बन्द चिज उद्योग ४० मिनेट पहिले
टीकापुरमा आगोले पोलिएका १७१ को निशुल्क शल्यक्रिया ४७ मिनेट पहिले
कबिता : मेरो बर्दिया म बर्दियाली २० घण्टा पहिले
भक्तपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना,चालकको मृत्यु २२ घण्टा पहिले
दिनदिनै महामारी फैलिदैछ तर सावधानी छैन, जोखिम उच्च ! १६ घण्टा पहिले
आईपीएलः आज चेन्नई र राजस्थानको म्याच भिड्दै, यस्तो छ सम्भावित प्लेइङ–११ ५८ मिनेट पहिले
भारतमा कोरोनाबाट एकै दिन १५०१ जना संक्रमितको मृत्यु २४ घण्टा पहिले
नेपालका विभिन्न ठाउँमा वायु प्रदूषण अझै कायमै ४ दिन पहिले
नयाँ वर्षमा सुनिता र दिनेशकाे हुन्न कसैको ५ दिन पहिले
शुक्लागण्डकीका सबै वडाको भवन निर्माण २ हप्ता पहिले
विदेशमा कोरोनाबाट ६६ हजार १९ जना नेपाली संक्रमित: एनआरएनए १ हप्ता पहिले
संक्रमण बढेपछि भारतीय सीमावर्ती शहर रुपैडिया जान रोक ४ हप्ता पहिले
जिल्लामै पहिलो पशुमैत्री उद्यान निर्माण ४ हप्ता पहिले
मधेशवादी नेताहरु अब ओलीको रक्षाकवच बन्ने ४ हप्ता पहिले
मनसुन बाहिरिन अझै केही दिन लाग्ने ६ महिना पहिले
तीन केजी गाँजासहित दुई युवा पक्राउ ९ महिना पहिले
पहाडी जिल्लामा छैटौँपटक हिमपात १ वर्ष पहिले
चाडपर्वको मुखमा पनि रोकिएन भारत पस्नेक्रम ६ महिना पहिले